ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သေတမ်းစာ… – Tameelay
*ဘဝ ဟူသည်တိုတောင်း လှပေစွ. ကန်ရေပြင်၌ တက်သော ရေပွက်မျှသာ ဖြစ်တယ်။*
*ကွေးသောလက်များ ဆန့် မသွားမီ မတည် သော အသက်
ခန္ဓာ ဟူသည် ဇာတိ ဇရာ မရဏ သောက ပရိဒေ၀ အနိစ္စ
အမြဲမှန်ကန်သော အရာ မမြဲခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။
ဘုရားရှင်သော်မှ မလွှဲနိုင်တဲ့တရား. အနိစ္စ သေဆုံးခြင်း၏ တရား။*
*တနေ့ တချိန် လေမှာလွင့်သော..ပွင့်ချပ်ငယ်နှယ် ကျွန်မ သေဆုံးပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်မ အသက် လူကြီးအရွယ် သွားရမဲ့လမ်း ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။*
*ကျွန်မ ကိုယ် ကျွန်မ ဖေဖေ့လို အာဇာနည်လို့ မယူဆပါဘူး။
အမှန်တရားနဲ့ တရားဥပဒေသာ မြတ်နိူးပါတဲ့ သာမန်လူ မြန်မာအမျိုးကောင်းစားရေးကို ရှေးရှူသူသာဖြစ်တယ်။*
*အကယ်၍ ကျွန်မ သေလွန်တဲ့အခါ မငိုပါနဲ့မပူဆွေးကြပါနဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ဈာပနပွဲ မလုပ်ကြပါနဲ့ ။
ကျွန်မ ကိုချစ်သူ မချစ်သူ မည်သူမဆို လာရှူနိုင်တယ် ပုပ်ပွ ဖူးယောင် လူသေကောင်၏ မျက်မြင်မုချ အသုဘ ကမ္မဌာန်း..
ကျွန်မ၏ အထွဋ္ဋ်မြတ်သော ဆံပင် ရွှေတိဂုံဆံတော်ရှင်သို့ လှူဒါန်းပါ။
ကျွန်မ၏ မျက်ကြည်လွှာ.. အလင်းမရသူကို လှူဒါန်းပေးပါ။
ကျွန်မ၏ နှလုံးသား..ကျောက်ကပ် အသည်း ကလီဇာများ ကောင်းသေးပါက လိုအပ်သူများအားလှုဒါန်းပေးပါ။*
*မသာတစ်ခေါက် ကျောင်းဆယ်ခေါက် နာရေးကူညီသော စေတနာရှင်
စင်ကြယ်သောကုသိုလ်နဲ့ ကိုကျော်သူ ကျွန်မ အသက်မဲ့ ခန္ဓာ ကို လှူပါတယ်။
*ပုပ်ပွလာမဲ့ ခန္ဓာအား မီးသင်္ဂြိုလ်ပြီး.. ရလာသောခန္ဓာ၏ ပြာမြေဇာ အပင်တို့ အတွက် မြေသြဇာကြွေးပေးပါ။*
*နောင်လာနောက်သားများအတွက် ကျွန်မ၏ နေအိမ် (သို့ ) ကျမ၏အကျဉ်းထောင်
အင်းစိန် ထောင်ခွဲ အမှတ် ၅၄ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပြတိုက်အဖြစ်ကျွန်မ၏ အသုံးအဆောင်..စာအုပ်
တီးသူမဲ့သော စန္ဒယား ကျွန်မ၏ မြန်မာ အ၀တ်အစား ရိုးသားသော မြန်မာအမျိုးသမီး၏တန်ဖိုးများ. နောင်လာနောက်သားများရှူမြင်စေ။*
ကျွန်မ၏ ဈာပန စရိတ် နှင့် ဆင်းရဲသော သံဃာအိုများ အတွက်ကျန်းမာရေး ဇီဝိတဒါန ဆေး အလှု ကွယ်လွန်သူ မိဘများ အမှုထား၍
ကျွန်မနှင့် ကွယ်လွန်သော ခင်ပွန်းအတွက် သားများမှရေစက်ချ..အမျှဝေစေချင်ပါတယ်။*
ကျွန်မ ရသော ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုငွေသား $1.3 million အား
ကိုယ်ကျိူး အတွက် မသုံးစွဲ တပြားမချန် မြန်မာပြည်သူများအတွက်
ကျမ်းမာရေးနဲ့ ပညာရေး ရံပုံငွေ လှုဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
*ဒီ သားများ အတွက်.. အမေ မွေးခဲ့သောဇီဝိတ အသက်
အဖေပေးခဲ့သော ပညာ မှတပါး အခြားပေးရန် စည်းစိမ် အမွေ မရှိ။
*အတူနေ မမဒေါ်ခင်ဝင်းနှင့် သမီးများ ကျွန်မအား စောင့်ရှောက်သောကျေးဇူး
အထူး မမေ့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။* *ဆေးဝါး ကုသပေးသော မောင်ငယ် ဒေါက်တာတင်မျိူးဝင်း
သမားစိတ်ရင်း ကြောင့် ကျမ အသက်ရှည်.. ကျေးဇူးဆပ်စရာ ပစ္စည်းမဲ့သူ ကျမ ဦးချပြီး.ဆပ်ပါရစေ။*
*ပြည်တွင်းပြည်ပ.. ကျွန်မကို ချစ်ခင်ကြသော ကျွန်မကို အားပေးကြသော..မိတ်ဆွေ သင်္ဂဟ
သိသူ မသိသူ မှန်သမျှ ကျွန်မပြုသောကုသိုလ် အဖို့ ဘာဂ ဝေမျှပါတယ်။ ရွှင်လမ်းကြစေ။*
*ကျွန်မ၏ တဦးတည်းသော ချစ်ရသောအကိုကြီး. သွေးသားစပ်သူ ဦးအောင်ဆန်းဦး အတွက်..
ကျွန်မ အဖေ၏ ပန်းချီတချပ်.. သူမသေခင်..ခေါင်းရင်းမှာ ချိပ်ဖို့ ပေးအပ်ခဲ့တယ်။*
*အနှစ် ၂၀ သက်တမ်းရ.သက်တော်ရှည် အဝေးရောက် ၀န်ကြီးချုပ် ကျွန်မ၏ တ၀မ်းကွဲမောင် ဒေါက်တာစိန်ဝင်း..
ကျွန်မရဲ့ အနှစ် (၂၀) အချုပ်ကာလအတွင်း ကျွန်မ ရတဲ့ဆုတွေလက်ခံတဲ့အခါ စင်ပေါ်တက် မျက်နှာပြ ဖော်ရပေးတာ အထူးကျေးဇူး တင်ပါတယ်။*
*ဖေဖေ့မျက်နှာနဲ့ကျွန်မအပေါ်..မရှိတဲ့ အပြစ်ကိုတင်.အကွက်ဆင်အတင်းထောင်ချ..သပ်သျှို ပြန်ကယ်ပြတဲ့
အတုယူ ချီးမွမ်းထိုက်ပါသော မှုးကြီးသန်းရွှေရဲ့ မေတ္တာ စေတနာမှတ်ကျောက် စာထိုးခဲ့ပါတယ်။
*ကျွန်မ မခေါ်ဘဲ အလည်တဲ့ဧည့်သည်. ကျွန်မ အသက်ဘေးအတွက် သူ စိုးရိမ်တယ်။
မောပမ်း မေ့လဲနေသော ဆီးချိူလူနာသည်သူ ပုတုဇ္ဇနော ဥမ္မတကော အဆိုရှိ
တကယ်မှန် မှန် မမှန် မှန်.. ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ ခမြာ..စေတနာနဲ့ သတိပေးရန်ကြံတဲ့အတွက်
သူ၏ ထားရှိသော ဂရုဏာ စေတနာကျေးဇူးတင်ပါထိုက်ပါတယ်။*
*ကျွန်မ သွားတဲ့အခါ.. တရား သံဝေဂရ.. မျက်ရည် မကျုကြပါနဲ့ ။
မပြီးဆုံးသေးတဲ့ ကျွန်မရဲ့ဝတ္တရား ကျရာနေရာ ကူညီပါဝင် ဖြည့်ဆည်းပေးကြပါ။
ကျွန်မ အတွက်ထားတဲ့ ချစ်မေတ္တာ တိုင်းပြည်အမျိုးအတွက် လက်ဆင့်ကမ်းကြိုးစားပေးပါ။
အဖေ ပေးခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်ရေး ကျွန်မ လက်ထက်မှာ မရသေးခင် ကျွန်မ သေလွန်ခဲ့ပါလျှင်
ကျွန်မ ကိုယ်စား တာဝန်ဆက်ယူပေးနိုင်စေ. တနေ့ မှာ..ဒေါင်းမျိူးနွယ်ဆက် ပြန်ခေါင်းထောင်ထကြပါစေ
မူရင်းတင်တဲ့ သူအား လေးစာစွာ Credit ပေးပါသည်
(အလှနျလေးစားဂုဏျယူမိပါတယျ အမရေယျ..ကွီးမွတျလှနျးတဲ့ စိတျဓါတျပါဘဲ) ခဈြမမေဒေျေါစု ရဲ့သတေမျးစာလေးကိုအားကွမိပါတယျခငျဗြာ
*ဘဝ ဟူသညျတိုတောငျး လှပစှေ. ကနျရပွေငျ၌ တကျသော ရပှေကျမြှသာ ဖွဈတယျ။*
*ကှေးသောလကျမြား ဆနျ့ မသှားမီ မတညျ သော အသကျ
ခန်ဓာ ဟူသညျ ဇာတိ ဇရာ မရဏ သောက ပရိဒဝေ အနိစ်စ
အမွဲမှနျကနျသော အရာ မမွဲခွငျးသာ ဖွဈတယျ။
ဘုရားရှငျသျောမှ မလှဲနိုငျတဲ့တရား. အနိစ်စ သဆေုံးခွငျး၏ တရား။*
*တနေ့ တခြိနျ လမှောလှငျ့သော..ပှငျ့ခပျြငယျနှယျ ကြှနျမ သဆေုံးပါလိမျ့မယျ။
ကြှနျမ အသကျ လူကွီးအရှယျ သှားရမဲ့လမျး ပွငျဆငျခဲ့ပါတယျ။*
*ကြှနျမ ကိုယျ ကြှနျမ ဖဖေလေို့ အာဇာနညျလို့ မယူဆပါဘူး။
အမှနျတရားနဲ့ တရားဥပဒသော မွတျနိူးပါတဲ့ သာမနျလူ မွနျမာအမြိုးကောငျးစားရေးကို ရှေးရှူသူသာဖွဈတယျ။*
*အကယျ၍ ကြှနျမ သလှေနျတဲ့အခါ မငိုပါနဲ့မပူဆှေးကွပါနဲ့ကွီးကွီးကယျြကယျြ စြာပနပှဲ မလုပျကွပါနဲ့ ။
ကြှနျမ ကိုခဈြသူ မခဈြသူ မညျသူမဆို လာရှူနိုငျတယျ ပုပျပှ ဖူးယောငျ လူသကေောငျ၏ မကျြမွငျမုခြ အသုဘ ကမ်မဌာနျး..
အိုနာ သခွေငျး၏ မမွဲသောလမျး။*
ကြှနျမ၏ အထှဋ်ဋျမွတျသော ဆံပငျ ရှတေိဂုံဆံတျောရှငျသို့ လှူဒါနျးပါ။
ကြှနျမ၏ မကျြကွညျလှာ.. အလငျးမရသူကို လှူဒါနျးပေးပါ။
ကြှနျမ၏ နှလုံးသား..ကြောကျကပျ အသညျး ကလီဇာမြား ကောငျးသေးပါက လိုအပျသူမြားအားလှုဒါနျးပေးပါ။*
*မသာတဈခေါကျ ကြောငျးဆယျခေါကျ နာရေးကူညီသော စတေနာရှငျ
စငျကွယျသောကုသိုလျနဲ့ ကိုကြျောသူ ကြှနျမ အသကျမဲ့ ခန်ဓာ ကို လှူပါတယျ။
*ပုပျပှလာမဲ့ ခန်ဓာအား မီးသငွ်ျဂိုလျပွီး.. ရလာသောခန်ဓာ၏ ပွာမွဇော အပငျတို့ အတှကျ မွသွေဇာကွှေးပေးပါ။*
*နောငျလာနောကျသားမြားအတှကျ ကြှနျမ၏ နအေိမျ (သို့ ) ကမြ၏အကဉျြးထောငျ
အငျးစိနျ ထောငျခှဲ အမှတျ ၅၄ တက်ကသိုလျရိပျသာလမျး အောငျဆနျးစုကွညျ၏ ပွတိုကျအဖွဈကြှနျမ၏ အသုံးအဆောငျ..စာအုပျ
တီးသူမဲ့သော စန်ဒယား ကြှနျမ၏ မွနျမာ အဝတျအစား ရိုးသားသော မွနျမာအမြိုးသမီး၏တနျဖိုးမြား. နောငျလာနောကျသားမြားရှူမွငျစေ။*
*ကြှနျမ၏ ကနျြရဈသော ဘဏျငှသေားအနညျးငယျ။
ကြှနျမ၏ စြာပန စရိတျ နှငျ့ ဆငျးရဲသော သံဃာအိုမြား အတှကျကနျြးမာရေး ဇီဝိတဒါန ဆေး အလှု ကှယျလှနျသူ မိဘမြား အမှုထား၍
ကြှနျမနှငျ့ ကှယျလှနျသော ခငျပှနျးအတှကျ သားမြားမှရစေကျခြ..အမြှဝစေခေငျြပါတယျ။*
ကြှနျမ ရသော ငွိမျးခမျြးရေး နိုဘယျဆုငှသေား $1.3 million အား
ကိုယျကြိူး အတှကျ မသုံးစှဲ တပွားမခနျြ မွနျမာပွညျသူမြားအတှကျ
ကမျြးမာရေးနဲ့ ပညာရေး ရံပုံငှေ လှုဒါနျးခဲ့ပါတယျ။
ကိုယျစိတျနှဈဖွာ ကမျြးမာ ခမျြးသာကွပါစေ။
ကွား ကွားသမြှ အမြှ အမြှ အမြှ ယူတျောမူ။*
နားလညျ ပါရမီဖွညျ့ပေးသူ သားမြား
*ဒီ သားမြား အတှကျ.. အမေ မှေးခဲ့သောဇီဝိတ အသကျ
အဖပေေးခဲ့သော ပညာ မှတပါး အခွားပေးရနျ စညျးစိမျ အမှေ မရှိ။
*အတူနေ မမဒျေါခငျဝငျးနှငျ့ သမီးမြား ကြှနျမအား စောငျ့ရှောကျသောကြေးဇူး
အထူး မမပေ့ါ။ ကြေးဇူးတငျပါတယျ။* *ဆေးဝါး ကုသပေးသော မောငျငယျ ဒေါကျတာတငျမြိူးဝငျး
သမားစိတျရငျး ကွောငျ့ ကမြ အသကျရှညျ.. ကြေးဇူးဆပျစရာ ပစ်စညျးမဲ့သူ ကမြ ဦးခပြွီး.ဆပျပါရစေ။*
*ပွညျတှငျးပွညျပ.. ကြှနျမကို ခဈြခငျကွသော ကြှနျမကို အားပေးကွသော..မိတျဆှေ သင်ျဂဟ
သိသူ မသိသူ မှနျသမြှ ကြှနျမပွုသောကုသိုလျ အဖို့ ဘာဂ ဝမြှေပါတယျ။ ရှငျလမျးကွစေ။*
*ကြှနျမ၏ တဦးတညျးသော ခဈြရသောအကိုကွီး. သှေးသားစပျသူ ဦးအောငျဆနျးဦး အတှကျ..
ကြှနျမ အဖေ၏ ပနျးခြီတခပျြ.. သူမသခေငျ..ခေါငျးရငျးမှာ ခြိပျဖို့ ပေးအပျခဲ့တယျ။*
*အနှဈ ၂၀ သကျတမျးရ.သကျတျောရှညျ အဝေးရောကျ ၀နျကွီးခြုပျ ကြှနျမ၏ တဝမျးကှဲမောငျ ဒေါကျတာစိနျဝငျး..
ကြှနျမရဲ့ အနှဈ (၂၀) အခြုပျကာလအတှငျး ကြှနျမ ရတဲ့ဆုတှလေကျခံတဲ့အခါ စငျပျေါတကျ မကျြနှာပွ ဖျောရပေးတာ အထူးကြေးဇူး တငျပါတယျ။*
*ဖဖေမေ့ကျြနှာနဲ့ကြှနျမအပျေါ..မရှိတဲ့ အပွဈကိုတငျ.အကှကျဆငျအတငျးထောငျခြ..သပျသြှို ပွနျကယျပွတဲ့
အတုယူ ခြီးမှမျးထိုကျပါသော မှုးကွီးသနျးရှရေဲ့ မတ်ေတာ စတေနာမှတျကြောကျ စာထိုးခဲ့ပါတယျ။
ကလိမျခွုံ နအဖ၏ ဂန်ဓဝငျမိခြောငျးမကျြရညျ။*
*ကြှနျမ မချေါဘဲ အလညျတဲ့ဧညျ့သညျ. ကြှနျမ အသကျဘေးအတှကျ သူ စိုးရိမျတယျ။
မောပမျး မလေဲ့နသေော ဆီးခြိူလူနာသညျသူ ပုတုဇ်ဇနော ဥမ်မတကော အဆိုရှိ
တကယျမှနျ မှနျ မမှနျ မှနျ.. ဟုတျသျောရှိ မဟုတျသျောရှိ ခမွာ..စတေနာနဲ့ သတိပေးရနျကွံတဲ့အတှကျ
သူ၏ ထားရှိသော ဂရုဏာ စတေနာကြေးဇူးတငျပါထိုကျပါတယျ။*
*ကြှနျမ သှားတဲ့အခါ.. တရား သံဝဂေရ.. မကျြရညျ မကြုကွပါနဲ့ ။
မပွီးဆုံးသေးတဲ့ ကြှနျမရဲ့ဝတ်တရား ကရြာနရော ကူညီပါဝငျ ဖွညျ့ဆညျးပေးကွပါ။
ကြှနျမ အတှကျထားတဲ့ ခဈြမတ်ေတာ တိုငျးပွညျအမြိုးအတှကျ လကျဆငျ့ကမျးကွိုးစားပေးပါ။
အဖေ ပေးခဲ့တဲ့ လှတျလပျရေး ကြှနျမ လကျထကျမှာ မရသေးခငျ ကြှနျမ သလှေနျခဲ့ပါလြှငျ
ကြှနျမ ကိုယျစား တာဝနျဆကျယူပေးနိုငျစေ. တနေ့ မှာ..ဒေါငျးမြိူးနှယျဆကျ ပွနျခေါငျးထောငျထကွပါစေ
ဒို့မွနျမာအမြိုး..သိက်ခာ မြိုးနှယျဆှေ။
မူရငျးတငျတဲ့ သူအား လေးစာစှာ Credit ပေးပါသညျ
Einstein on Buddhism ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် အိုင်းစတိုင်း
Einstein on Buddhism ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် အိုင်းစတိုင်း ဆရာ့ဆောင်းပါးပါဆရာ။ အော်။ ကျေးဇူး။ အိုင်စတိုင်း၊ ဘတ်ထရန်ရပ်ဆယ်၊ ဒေးဗစ်ရိုင်းဇနီးမောင်နှံ၊ နာဆာရောက်ဂျာမန်ဒုံးပျံပါရဂူ (အမည်မသိ) စသည့် အနောက်တိုင်းသိပ္ပံပါရဂူ တွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီးများ၏ ဗုဒ္ဓနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ်ရှုမြင်သုံးသပ်ပုံများကို သိလိုပါသည်။ တချို့ ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ပြောင်းသွားသည်ဟုဖတ်ရဖူးပါသည်။ တချို့နှစ်သက်သဘောကြသော်လည်း ဘာသာမပြောင်းပါ စသည် သိစရာလေးတွေကို …
ဒီကိစ္စတော့ လက်မခံနိုင်ဘူး၊အခုလို ဖြစ်သွားတာ နိုင်ငံတော်သိဖို့ ကောင်းတယ်။
ဒီကိစ္စတော့ လက်မခံနိုင်ဘူး ဒီသတင်း ဖတ်ရသူတိုင် ရှယ်ကြည့်ပါ တရားသူကြီး နောင်တရလိမ့်မည်။ အခုလို ဖြစ်သွားတာ နိုင်ငံတော်သိဖို့ ကောင်းတယ်။ အခု ပြန်လွတ်ဖို့ ၁ လပဲ လိုတော့တယ်တဲ့… ပုံပြင် ဆန်ဆန်တွေ ဇာတ်လမ်းဆန်ဆန်တွေ မလုပ်ကြပါနဲ့ မြန်မာပြည်က ဇာတ်ထုတ်ပေါင်းစုံနဲ့ ဗာရာဏသီမဟုတ်ဘူး လောလောဆယ်တော့ အကတိ …